DHAGEYSO: Xasan Sheekh ‘‘Fahad Yaasiin wuxuu ka shaqeynayaa dumin Siyasadeed” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Xasan Sheekh ‘‘Fahad Yaasiin wuxuu ka shaqeynayaa dumin Siyasadeed”
DHAGEYSO: Xasan Sheekh ‘‘Fahad Yaasiin wuxuu ka shaqeynayaa dumin Siyasadeed”
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qeyb galayay barnaamij dood wadaag su’aalo lagu weydiinayay ayaa weerar afka ku qaaday Taliyaha Nabadsugida iyo Sidroonka Qaranka Fahad Yaasiin, isaga oo ku sheegay in uu yahay Milkiilaha dowladda.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in Fahad Yaasiin uu markii hore la wareegay Madaxtooyada, balse la ogyahay sida uu ka yeelay, sidoo kalena Ciidamada Nabadsugida, Booliska iyo Hay’addaha kale ee dowladda uu dhammaantood wada dumiyay.
“ Milkiilaha Dowladda waa Fahad Yaasiin, NISA ayuu dumiyey, Booliska ayuu dad ku dul dumiyey, haddana ka yeeli meyno inuu siyaasadda dumiyo wiilka aan adeerka u ahay waxaan leeyahay hoos wax waan kuugu sheegnay balse hadda Public baa laguugu sheegaayaa‘‘ ayuu yiri Xasan Sheekh Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Si kastaba, Xasan Sheekh ayaa hadda waxaa uu kamid yahay musharraxiinta Madaxweynaha ee aad u dhaliilsan dowladda Madaxweyne Farmaajo, waxaana uu ku eedeeyaa inaysan bulshada wax u qaban, sidoo kalena ay doonayaan inay faramaroojistaan doorashooyinka.
Halka hoose ka dhageyso codka Xasan Sheekh Maxamuud: